Usapho lakwaGarcía Lorca lucela ukuba imbongi ingafunwa | Uncwadi lwangoku
ULaura García Lorca, umtshana wembongi
Njengoko uyazi, iifayile ze Imbongi yaseGranada UFederico Garcia LorcaWatshutshiswa ngamaFranco ngenxa yesondo sakhe kunye nangenxa yezopolitiko zakhe (wayenguRiphabliki), de waba nesiphelo esilindelweyo nesibuhlungu: wabulawa. Umzimba usahleli awaziwa nanamhlanje ukusukela oko wangcwatyelwa kwingcwaba elinabantu abaninzi, kodwa kuyaziwa ukuba kungasesedolophini Umthombo Omkhulu, eAlfacar.
Into yesiqhelo iya kuba, njengoko kwenzekile namanye amagcisa, ukuba usapho belufuna ukufumana umzimba ukuze bawungcwabe engcwabeni labucala kwaye bawuhloniphe. Nangona kunjalo, kule meko, Usapho lakwaGarcía Lorca lucela ukuba imbongi ingafunwa. U-Laura García Lorca, umtshana ka-Federico kunye nomongameli wangoku we-Foundation ozinikele kumbongi, uphawule ukuba usapho lwakhe "aluzange" luthintele ukufunwa kwamathambo abo badutyulwa kwi-Civil War kunye nolawulo luka-Franco emangcwabeni, kodwa wanyanzelisa ukuba ilungelo lakho lokungakhange ufune amathambo kamalume wakho liyahlonitshwa.
Amagama akhe athile abe ngala alandelayo: "Siyalikhusela eli lungelo kuba kubonakala ngathi kubalulekile kuthi ukuba nabani na ofuna ukukhangela ilungu losapho angenza njalo, kodwa asikhangeli elethu, kwaye akukho mntu unelungelo lokumfuna."
Zonke ezi ndaba ziphume njengesiphumo se UJavier Navarro Chueca, umembi wezinto zakudala kunye nomongameli wombutho Buyela noHonor, kukhokelele ekufuneni amanye amajoni aseRiphabhlikhi nawo adutyulwa angcwatyelwa kwindawo enye apho umzimba wembongi wawuza kuba khona. UJavier Navarro Chueca uphawule oko "Isikhundla seLorca sihloniphekile, kodwa kufuneka bahloniphe ukuthanda kwezinye iintsapho ukukhangela amaxhoba abo."
Ngamafutshane, nangona impendulo yosapho lakwaGarcía Lorca ingaqondwa okanye ingeyiyo le nto bekulindelwe, iyahlonitshwa okanye ngaphezulu njengesinye isikhundla esifuna ukufumana imizimba yabanye abantu abaswelekileyo ngelo xesha. Igama elinye: Intlonipho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izaziso » Usapho lakwaGarcía Lorca lucela ukuba imbongi ingafunwa
UDon Juan Pérez sitsho
Ewe, bebengafuni nto ingako.
Phendula uDon Juán Pérez
UFernando Durán Martínez sitsho
Ewe banalo elo lungelo. Kodwa lo mbandela unzima ngakumbi (njengoncwadi lukaLorca), kuba eneneni ukulandelelana kolo khangelo lolomnye umntu, ndicinga ukuba utitshala weRiphabhlikhi uDióscoro Galindo kuba usapho lwakhe lucele. Kwaye ukuba amathambo abantu afunyenwe, kubalulekile ukwazisa inkundla ehambelanayo kwaye uzame ukufumanisa ezo ntsalela kwaye ufumanise ukuba kutheni bengcwatyelwe apho kwaye baphande unobangela wokufa. (into esiyaziyo sonke):
Kwizenzo zolwaphulo-mthetho kulawulo lukaFranco.
Phendula uFernando Durán Martínez
Bayaphelelwa zizisulu zokuba bahlala kakuhle kakhulu
Tsalela umnxeba u-Ian Gibson ukuba enze enye inguqulelo yeBiography yakhe edumileyo
ULUIS RICARDO sitsho
ABANYE BASEKHO KWIMFAZWE YOKUPHILA, KUFUNEKA SIBAShiye ABAFILEYO BOPHUME BONELE KWINGXESHA EZOHLWAYO EMVA KWEMINYAKA EYI-80 YEMFAZWE KWABANYE ABANINZI EMVA KOKUFA KWEFRANCO
Phendula uLUIS RICARDO
UFrancisco Jiménez (@Francisjn) sitsho
Iintsapho ezifuna ukufumana abafileyo bazo zinelungelo ... Into engalunganga kukwenza ipolitiki kwimemori yezembali ukuze ufumane iivoti ezimbalwa kwaye uzogqume ngokugrumba okungeyonyani.
Phendula kuFrancisco Jiménez (@Francisjn)
UHarry Hole ubuya ngo-2017-inoveli entsha kunye nefilimu